Chelsea oo u gudubtay Finalka Champions League,marki ay reebtay Barcelona, Faaqidaada Ciyaaraha+SAWIRO | GARBODADARNEWS
Chelsea oo u gudubtay Finalka Champions League,marki ay reebtay Barcelona, Faaqidaada Ciyaaraha+SAWIRO
Giriyaadnews/London/Kooxda ku ciyaareysay Sagaalka ciyaaryahan ee Chelsea ayaa u gudubtay Finalka Champions League-ga,marki ay reebtay kooxda Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou ay isku arkeen lugti labaad ee Sami finalka Campions-ka.
Chelsea ayaa kusoo baxday isku cel celis goolal dhan 3-2,waxaana ay caawa garoonka Camp Nou Barcelona kaga dhalisay 2 gool.
Cayaartan oo ahayd mid adag oo xiiso gaar ah lahayd, ayaa waxaa gool ku hormartay kooxda martida loo ahaa ee Barcelona,waxaana u dhaliyey Sergio Busquets daqiiqadii 35-aad,iyadoo goolka labaad ee Barcelona uu Nuski saaca ee hore u dhaliyey laacibkeeda qadka dhexe ee Andrés Iniesta daqiiqadii 44-aad.
Chelsea oo xaaladdu ka xuntahay rajadoodana dhimatay ayaa waxaa soo nooleyey laacibka reer Brazil ee Ramires,marki uu kooxdisa Chelsea u dhaliyey goolki koowaad daqiiqadii 45-aad,iyadoo Ramires uu daafaca ka soo cararay marki uu goolka dhalinayey.
Marki la isku soo noqday Nuski saaca ee danbe ee cayaartya ayaa kooxda Barcelona waxa ay heshay gool ku-laad,marki Drogba uu xeerada ganaaxa ku tuuray Alves,waxaana gool ku laadkaasi loo dhiibay Messi oo qasaariyey,marki ay ku badda birta kaga dhacday daqiiqadii 49-aad.
Lionel Messi ayaanan weli wax gool ah ka dhalin kooxda Chelsea,iyadoo Chelsea ay ilaashaneyso iskoorkaasi,taasoo muujineysa in dhowr fursadood oo uu helay laacibkaasi uu badbaadiyey goolhaya Chelsea Petr ?ech,kaasoo laf dhuun duleesha ku noqday Messi.
Chelsea oo weerar culus ku socday Nuski saaca ee danbe ayaa waxaa istaajiyey weeraryahanka reer Spain ee Fernando Torres,marki uu Cheslea u dhaliyey goolki labaad oo ahaa kii guusha buuxaday siiyey,kaasoo quusiyey cayaartoyda kooxda Barcelona daqiiqadii 90-aad ee dhamaadki cayaarta,marki uu si fudud ku jiiray gool hayaha kooxda Barcelona.
Chelsea waxaa calaamadda casaanka ah laga siiyey kabtanka kooxda John Terry,kaasoo jilibka si kama ugu dhiftay ciyaaryahan Sanchez daqiiqadii 37-aad ee bilaawgi cayaarta,waxaana taasi walaac ka muujiyey taageerayaasha oonka u qaba koobkan ee Cheslea,kuwaasoo ku murmayey “ Hadaan herno Terry ayaa na reebay”.
Si kastaba kooxda Cheslea ayaa haatan waxa ay taagan tahay Finalka,waxaana ay la ciyaari doontaa Real Madrid ama Bayern Munich kii soo baxa,waxaana Labadan kooxood ay ciyaarayaan habeen danbe,iyadoo Bayern Munich ay wadato badis,inakstoo gool marti ah laga heysto.